The Huawei Mate 30 na-enweghị ngwa Google: Ihe niile ịchọrọ ịma | Akụkọ akụrụngwa
The Huawei Mate 30 na-enweghị ngwa Google: Ihe niile ịchọrọ ịma
Tọzdee gara aga gosipụtara ọkwa ọhụrụ nke Huawei Mate 30, jiri ekwentị ọhụrụ ya abụọ. N'agbanyeghị ezigbo nkọwa, ezi atụmatụ, ma ọ bụ ezigbo ese foto, bụ enweghị ngwa Google na ọrụ Google Play ihe jidere akụkọ kachasị na nke a, yana iji mbipute isi mmalite nke gam akporo.
Ihe mgbochi nke ụlọ ọrụ ahụ na-ata ahụhụ na United States Ọ bụ ihe na-emetụta n'ụzọ zuru oke nso nke Huawei Mate 30. N'ihi nke a, a na-amanye ekwentị iji ụdị nke gam akporo mepere emepe, na enweghị ngwa ma ọ bụ ọrụ Google dị.
1 Enweghị ọrụ Google na ọrụ Google Play
2 Kedu ihe Huawei Mate 30 nwere kama?
3 Ihe eji emeghe Android
4 HarmonyOS dị ka sistemụ arụmọrụ
Enweghị ọrụ Google na ọrụ Google Play
Agaghị arụnyere ngwa Google na ndabara na ekwentị, ihe asịrị na izu ndị a. Agaghị etinye Google Play Services arụnyere na ụdị ndị a dị na Huawei Mate 30. Nke a pụtara na ekwentị enweghị Google Play, ngwa ngwa, ma ọ bụ ngwa ndị dị ka Maps, Gmail ma ọ bụ Onye nnyemaaka arụnyere na ndabara. Ọzọkwa, enweghị ike ibudata ha na mbụ.
Ọ bụ ezie na site n'aka Huawei, ekwenyela na ịnweta ha ga-eme ka ọ dị mfe, mana ụzọ a ga-esi kwe omume akọwapụtabeghị ya. Huawei Mate 30 agaghị abụ igwe izizi na ahịa enweghị ọrụ Google Play. Ọtụtụ ụdị nke ụdị ndị China na-abịaghị na-enweghị ha, naanị na na nke a, nwụnye ga-adị mgbagwoju anya, ọ bụ ezie na akara ndị China ga-emeghe bootloader, yabụ ọ ga-ekwe omume.
Yabụ, ekwentị agaghị enwe ha nwa afọ. Gbanye ekwentị na mpaghara a agaghị adị ka ụdị gam akporo ndị ọzọ, n'ihi na anyị agaghị enwe otu ngwa ma ọ bụ jiri akaụntụ Google banye, dị ka ọ dị ugbu a. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ na-enye mmesi obi ike na Huawei Mate 30 a ha ga-arụ ọrụ na ngwa dịka YouTube, Gmail ma ọ bụ Google Maps. Naanị ha agaghị abịa arụnyere na ndabara ma n'oge ahụ usoro a ga-enye ndị ọrụ ka ha wee nwee ike ịmata ha amaghị.
Ozugbo awụnyere ngwa ndị ahụ, ihe niile ga-arụ ọrụ na ekwentị, dịka anyị na-emebu. Obi abụọ adịghị na ya kedu ka ọ ga-esi kwe omume ịnweta Ọrụ Google Play ma ọ bụ ngwa Google n'otu n'ime ngwaọrụ ndị a. Nke a bụ ihe a na-arụ ọrụ ugbu a, dịka ha kwuru site n'aka onye nrụpụta n'onwe ya, yabụ n'ime izu ole na ole, a ga-enwerịrị nghọta karịa n'akụkụ ahụ.
Kedu ihe Huawei Mate 30 nwere kama?
Enweghi Google Play Services na ngwa Google ka akwadoro oru ya. Companylọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị HSM (Huawei Mobile Services) na ekwentị abụọ, na mgbakwunye na inwe ụlọ ahịa ngwa ya, App Gallery. Otu ụlọ ọrụ na-eme ntinye ego dị mkpa ka ọ gbasaa ọnụ ọgụgụ nke ngwa dị na ya, ugbu a karịa 11.000, ka ndị ọrụ nwere Huawei Mate 30 ndị a nwee ike ịnweta ha.
Na mgbakwunye, ebe ọ bụ na mbinye aka ọ gosipụtara na HSM gụnyere iwebata GSM gị, GPS na eserese gị. Yabụ ọrụ ndị dị mkpa na ekwentị gam akporo agaghị adị na ụdị ndị a. O yikarịrị ka ụlọ ọrụ ahụ ga-eji maapụ nke ya, nke ha kwupụtara na ha na-emepe emepe, nke ga-arụ ọrụ na Ọktọba. Kinddị Google Maps, mana site na ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya.
A ga-anọchikwa ụfọdụ ngwa ndị a na-emebu na gam akporo. Ihe mgbochi a na - egbochi gị iji Google Assistant na ekwentị. Ya mere, ụlọ ọrụ ahapụla anyị Huawei Assistant, onye nnyemaaka maka Huawei Mate 30 a, nke ga-enye ọtụtụ ọrụ anyị amatalarị na enyemaka Google na-emekarị. Nwere ike ịrụ ọrụ na ekwentị, dịka oku, gụọ ozi, ngwa ngwa ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na o yikarịrị ka ọ gaghị enwe omume ma ọ bụ ọrụ niile nke onye enyemaka Google na-enyekarị anyị.
Ihe eji emeghe Android
Mgbanwe ọzọ dị na Huawei Mate 30 bụ ojiji nke oghere Android. Ihe mgbochi US na-amanye ha ịbanye n'akụkụ oghere nke sistemụ arụmọrụ, nke dịịrị onye ọ bụla chọrọ iji ya. Ọ bụ ezie na ha na-enye ya EMUI 10, nhazi akwa ya, iji nweta ahụmịhe anyị ji na gam akporo.
Ndị ọrụ agaghị echegbu onwe ha banyere mmelite na nke a, ebe ọ bụ na gam akporo mepere emepe, na mbipute ya 10, ga-enweta mmelite nche n'oge niile. Ya mere, ekwentị ga-echebe site na egwu. A ga-anabatakwa ụdị ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ, na ụdị nsụgharị a, na-enweghị ngwa Google.
EMUI 10 interface ga-emelitekwa, n'ezie ịkwaga EMUI 11 n'afọ ọzọ. N'echiche a, ekwesighi inwe ọtụtụ mgbanwe ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga nke oyi akwa.
HarmonyOS dị ka sistemụ arụmọrụ
Ná mmalite nke August, Huawei gosipụtara sistemụ arụmọrụ ya, akpọ HarmonyOS. Chinesedị ndị China nwere atụmatụ iji ya n'ọtụtụ ụdị ngwaọrụ, mana ọ kachasị n'ime mpaghara Internetntanetị nke Ihe. Yabụ na ọ bụ ihe anyị nwere ike ịhụ na ngwaahịa dịka igwe onyonyo, igwe okwu na ọtụtụ ndị ọzọ. Achịghị iji ya na ekwentị.
Agbanyeghị na HarmonyOS erubeghị njikere iji ya na ekwentịỌ bụ ya mere ọ bịabeghị na Huawei Mate 30. Akara ndị China na-ekwu na ihe kacha ya mkpa bụ iji gam akporo, mana iji sistemụ arụmọrụ bụ ihe a na-atụle. Agbanyeghị na ụfọdụ mgbasa ozi enwere okwu gbasara iji usoro a, mgbanwe nwere ike were afọ ole na ole. Yabụ na ọ bụ ihe nwere ike ịmalite, mana ọ ga-ewe obere oge ka ọ bụrụ onye isi.
Ekwesighi ịhapụ ya na n'ọdịnihu dị nso, ọ ga-ejedebe iji sistemụ arụmọrụ na igwe eji eme ihe. Karịsịa ma ọ bụrụ na mmekọrịta nke United States na-anọgide na-adịghị mmaMana ika ahụ na-anwa iji gam akporo na ekwentị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » The Huawei Mate 30 na-enweghị ngwa Google: Ihe niile ịchọrọ ịma
Huawei Watch GT 2: Akara ọhụrụ smartwatch bụ nke gọọmentị